संखुवासभा घटनामा ह ति या र होइन यस्ता बस्तु प्रयोग भए, घटना कसरी भयो प्रहरीले दियो यस्तो जानकारी ? – My Blog
संखुवासभा घटनामा ह ति या र होइन यस्ता बस्तु प्रयोग भए, घटना कसरी भयो प्रहरीले दियो यस्तो जानकारी ?
No Comments on संखुवासभा घटनामा ह ति या र होइन यस्ता बस्तु प्रयोग भए, घटना कसरी भयो प्रहरीले दियो यस्तो जानकारी ?
घरैमा रहेका ९० वर्षका तेजबहादुरका बुबा भने जी वि तै छन् । कान कम सुन्ने र आँखा पनि कम देख्ने उनले आफू साँझमै खाना खाएर सु ते को र घटनाबारे केही थाहा नपाएको बताएका छन् । घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीको टोलीसमेत विराटनगर आइपुगेको छ भने डिएसपी रुकमबहादुर कुँवरको कमान्डमा ५ जनाको टोली घटनास्थलतर्फ हिँडेको प्रहरीले जनाएको छ ।
← एउटा फुच्चे केटोको सफलता : जसले डाक्टरी छाडेर ६ वर्षमै बनायो २ अर्ब डलरको कम्पनी → टिकटकमा भाईरल भएकी ‘इन्डियन लाहुरे’को यति राम्री १६ बर्षे छोरी । हिरोईन भन्दा राम्री, नेपालमै बिहे गर्ने मन (भिडियो हेर्नुस)